I-Stablecroft Cottage - I-Airbnb
Beka kwintlambo entle yaseWoodland kufutshane neConiston. I-Croft Cottage ezinzileyo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla, kwaye ujonge iPaki yeSizwe yeSithili seLake. Inegumbi lokulala eli-1 elinesibini, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala elitofotofo kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. UStuart & Lynda bahlala ngabamelwane kwaye bayakuvuyela ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo. Sijonge phambili ekwamkeleni.
Nceda uqaphele ukuba samkela kuphela iindwendwe ezimbini ezibandakanya abantwana abaza kuhlala eStablecroft Cottage.
I-croft ezinzileyo yi-1 ye-5 yokuhlala entle e-Ringhouse Cottages. Inamagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlambela. Inegumbi lokuhlala elinesofa, i-wi fi yasimahla, isidlali sedvd, iSAT Smart TV yasimahla. Ikhitshi / isidlo sangokuhlwa sixhotyiswe kakuhle ngefriji / ifriji, imicrowave, isitovu segesi kunye neoveni. Kukho indawo yokuhlala yabucala ngaphandle, indawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokuphumla..
4.91 · Izimvo eziyi-262